Saamiga video arkaysid ee telefoonada gacanta ayaa kor u kacay 133% sanad kasta. Inkasta oo ay gaadiidka video mobile ka badan tahay 53% (weli ka hooseeya 50% ee 2012), waxa la filayo in la kordhiyo in 69% ay 2018. Sida laga soo xigtay Ooyala, Nielsen iyo ilo kale oo sumcad leh, daawadayaasha mobile qarashgareeyay in ka badan 50% oo ka mid ah markii la daawado online on degdegga in raagto in ka badan 10 daqiiqo. Dhinaca kale, milkiilayaasha kiniin u badan tahay in ay daawadaan ah oo dhererkeedu wuxuu buuxa video (ka sarreeya 45 daqiiqo). Taasi waa badan tahay sababtoo ah qalabka la Timaadda weyn size shaashad iyo raaxo badan u arkaysid dheer videos.
Top 12 Online & Streaming Goobaha
La aasaasay: 2007
Nooca: Video ku saabsan baahida goobta
59,000+ videos in database
La aasaasay: 1997
23,000+ videos in database
La aasaasay: 2008
Nooca: goobta qaybinta Digital
"Malaayiin songs, Kumanaan videos"
La aasaasay: 2005
Nooca: Video goobta adeega martigelin
100 saacadood oo video Upload / daqiiqo
La aasaasay: 2004
26,000+ videos in database
Nooca: Video goobta qaybinta
521K + macaamiishu
14 + xubnaha
La aasaasay: 2003
400m + videos daawaday / bishii
111,000+ filimada ee database
2.2B + videos viewed / bishii
La aasaasay: 2009
Nooca: goobta music Online
44B + videos music daawaday sannadkii hore
La aasaasay: 2006
Nooca: goobta Video Streaming
30M + users
Hababka Common Radidiyaha
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan si ay Radidiyaha iyo daawato videos on qalabka aad mobile. Waxaad dooran kartaa in aad si toos ah u daawado ee telefoonka gacanta ama kiniin ah, download it for offline helaan iyo sidoo kale loogu badalo faylasha bixi u waafaqsan loo maqli sare leh qalab kale. Waxaa sidoo kale jira software talinayaa qaar ka mid ah si loo sugo in aad arkaysid video-aragnimo waa mid tayo sare leh arrimaha loo maqli yar ama ma at dhan.
Daawo on Qalabka kasta
1 Direct Radidiyaha
Waa habka loo maqli karo ugu toos ah daawashada cajaladaha ku saabsan qalabka aad mobile. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa internet-ka oo aad bilaabi kartaa in ay maraan si aad video goobta uu jecel yahay. Marka aad hesho video clip ah, guji PLAY .
Haddii ay diido in ay Radidiyaha ay sabab u tahay codec leheyn ee qaab file, waxaad samayn kartaa si dhab ah isku dayaan ah ciyaaryahanka video dibadda . An ciyaaryahan video dibadda sida caadiga ah bixisaa muuqaalada ka badan hal caadiga ah ee qalabka mobile sida:
Taageerada gebi ahaanba qaab file kasta
Bookmark ugu cadcad ee ay helaan ku haboon
Nadiifi, uncluttered iyo Ad-free
Macluumaad dheeraad ah oo ...
Mararka qaarkood, waxaad dareemay sida degsado videos for offline la daawado. Taasi tusaale ahaan; ee dhulka hoostiisa ah, baska, inta lagu guda jiro transit duulimaadka iyo wax ka badan. Si kastaba ha ahaatee, inta badan oo ka mid ah internetka iyo video geeyo goobaha iman mayso feature dajinta. On top of in, waa ka yar ficil ahaan ay si toos ah kala soo bixi gal qalab mobile.
Sidaa darteed, xal u fiicnaan lahayd in download it rogtid oo aad PC ka dibna wareejiso qalab aad doorbiday. Ujeedada in, waxaad u baahan doontaa downloader video ah. Oo weliba waxaa video ah, waxaad kaloo sameyn kartaa:
Record videos waa halka uu hoorto
Barnaamijka jadwaliye hawsha si auto-xiritaanka
Waraaqda audio ka video
3 ka daawan kartaa Qalabka kasta
Ma ahan la yaab leh si ay u arkaan fariin qalad ah oo sheegaya in 'qaab file aan la aqoonsan', 'codec baadi', ama wax la mid ah. Taasi waa run gaar ahaan marka aad rabto in aad Radidiyaha file a video badan oo ku saabsan qalabka telefoonada gacanta ama faylka caadi ahaan loo isticmaalo MP4 on qalabka macruufka ku shaqeeya.
Isla sidaas ayaa dhacaya marka aad daawaday video ah oo aad aad u badan ku raaxaystaan ​​oo jeclaan lahaa in aan u geliyaan online for qaybsiga, laakiin qaab video ah aan lagu aqbalin. Sidaas oo ay tahayna, ma ha idinku dhibaato, maxaa yeelay, had iyo jeer waxaad isticmaali kartaa Converter video ah in ay ku caawiyaan in ay sababi karto:
Beddelaan 30X dhaqso
Beddelaan inay 158+ qaabab video
Video Wireless qalabka kala iibsiga
> Resource > Video > Popular Online & Streaming Video Goobaha